को हुन् असेर मलिक ? जसले नोबेल पुरस्कार विजेता मलालसँग गरे विवाह ? « News24 : Premium News Channel
को हुन् असेर मलिक ? जसले नोबेल पुरस्कार विजेता मलालसँग गरे विवाह ?
काठमाडौं । नोबेल पुरस्कार विजेता पाकिस्तानी युवती मलाला युसुफजाइले बैवाहिक जीवन सुरु गरेकी छन् । छात्रा शिक्षाका लागि अभियान चलाएका बेला तालिबान विद्रोहीहरुले गोली प्रहार गरेपछि चर्चामा आएकी मलालाले पाकिस्तानकै असेर मलिकसँग विवाह गरेकी हुन् ।
मंगलबार बेलायतको बिर्मिङ्घममा इस्लामिक समारोहका बीचमा मलला र असरको बैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्ना पतिसहितको फोटो पोष्ट गरेर २४ वर्षीया मलालाले सबैको तर्फबाट शुभकामना र आर्शिवाद चाहेको उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘मैले मेरो नयाँ जीवन सुरु गरेकी छु । यो मेरो जीवनको ठूलो अवसर हो । असेर मलिक मेरो जीवनसाथी बन्नु भएको छ ।’ त्यसोत, अहिले १७ वर्षकै उमेरमा सन् २०१४ मा नोबेल पुरस्कार विजेता मललाका श्रीमान असेर मलिक को हुन् त ? भन्ने सबैलाई लागेको छ ।
को हुन् असेर मलिक ?
मलला युसुफजाईका श्रीमान असेर मलिक स्पोर्ट्स उद्योगसँग जोडिएका छन् । असेरको लिंक्डइन प्रोफाइलका अनुसार उनी क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी)मा हाई पर्फमेन्स जनरल म्यानेजर हुन् । उनले लाहौर युनिभर्सिटी अफ म्यानेजमेन्ट साइन्सबाट इकोनोमिक र पोलिटिकल साइन्समा ग्रेजुएशन गरेका छन् ।
असेर मलिकले कोक–कोला र फ्राइसल्याण्ड कैंपिनालगायतका प्रसिद्ध ब्राण्डहरुको साथमा पनि काम गरिसकेका छन् । रिपोर्टका अनुसार असेर मलिक पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल)को फ्रेञ्चाइजी मुल्तान सुल्तानका लागि पनि अपरेशनल म्यानेजरको रुपमा काम गरिसकेका छन् ।